Semalt: Ahoana ny fahafantaran'ny Google amin'ny hoe (ary nahoana) mba hisakanana ny tranokalanao?
Zava-dehibe toy ny sehatra SEO ny Google Spider raha mikarakara tranonkala iray. Mananika ny vohikala sy ny votoatin-dresaka avy amin'ny pejy rehetra azony izy ireo. Izy io koa dia manatanteraka ny fanavaozana indray amin'ny pejy novaina amin'ny tranonkala. Manao izany tsy tapaka izany, mifototra amin'ny antony maromaro. Anisan'izy ireo, fa tsy voafetra amin'ny, pejy PageRank, fisarihana voafetra, ary rohy hita ao amin'ny pejy. Ny fotoana inefatry ny Google hitsikerana tranonkala iray dia miankina amin'ny iray na maromin'izany.
Ny tranonkala iray dia tokony hivezivezy mora foana avy amin'ireo mpitsidika ary koa ny fitifirana gidro Google. Izany no antony mahatonga ny tranonkala crawl-friendly ho tombotsoa amin'ny tombontsoa azon'ny SEO fampielezan-kevitra. Raha tsy izany dia tsy ho afaka hahazo ny fidirana amin'ny votoaty i Google, ka noho izany dia mampihena ny fisainan'ny tranokalan'ny tranokalan'ny fikarohana .
Ross Barber, mpitantana ny Success Success of Semalt , dia mamaritra fa ny roa amin'ireo fotodrafitrasam-pandrafetana lehibe indrindra ampiasain'i Google hanosehana ny fanapahan-keviny hanamaivanana na hampijanona ny tranonkalanao dia ny fotoana mifandray sy ny HTTP codice status. Ny hafa dia misy ny baiko fanoherana, "tags manaraka", ary robots.txt.
Mampifandray ny Time and HTTP Status Codes
Ny vanim-potoana mifandraika amin'ny fotoana mifandray dia mifandraika amin'ny habetsahan'ny fotoana andalovan'ny botanika Google hitsidika ny tranonkala sy ny tranonkala. Ny haingam-pamokarana dia tena sarobidy avy amin'ny Google satria tena maneho ny fahombiazan'ny mpampiasa. Raha toa ka tsy vitan'ny Internet ny tranonkala, dia tsy dia be loatra ny tranonkala. Ny Google Spider dia hanao ezaka hahatratra ny tranonkala, ary raha toa ka ela kokoa ny fotoana ahafahana mamorona fifandraisana, dia miverina izy ireo ary manodina azy io matetika. Ankoatra izay, raha manosika ny Google hanondro ny tranonkala amin'ny haavony ankehitriny, dia mety hanelingelina ny traikefan'ny mpampiasa izany satria mety hampihena ny seriverany izany.
Ny singa faharoa fanondroana dia ny code code HTTP izay mifandray amin'ny hoe ahoana no hamalian'ny server ny fangatahana hitsikerana ilay tranonkala. Raha toa ka ao anatin'ny fari-tsarim-pifampifehezana 5xx ny codecode, dia i Google dia mametraka izany amin'ny tenany mba hampiato na hanemorana ny taham-pahafatesana izay ahitan'izy ireo ny tranonkala amin'izao fotoana izao. Ny zava-drehetra ao anatin'ny sokajy 5xx dia endriky ny olana mety hitranga amin'ny servera ary mety hamaha olana ny fangatahana ny fangatahana. Noho ny loza mety hiteraka olana hafa, ny botsika Google dia hitsahatra sy hitarika ny fizotry ny firaketana raha toa ka azo tratrarina kokoa ny serivera.
Rahoviana i Google no mitaona ny tranokala?
Mieritreritra i Google fa manome ny traikefa tsara indrindra ny mpampiasa ary hametraka ireo tranonkala izay manatsara ny singa SEO amin'ireo tanjona avo lenta ireo. Na dia izany aza, raha misy ny habaka voalaza etsy ambony, ny tranonkala dia mandidy ny Googlebot hanandrana hitsikilo azy any aoriana. Raha mbola mitohy ny olana dia tsy hanana tombontsoa lehibe ny tompony mba handefa an'i Google hamakafaka ny votoatiny ary hanomezany azy ho laharam-boninahitra tsara amin'ny valin'ny fikarohana. Ankoatra ireo olana ireo, ny famantarana famantarana rehetra dia hanakana ny tranokala tsy ho hita amin'ny valin'ny fikarohana.
Tahaka ireo algorithm hafa ampiasain'i Google, dia misy koa ny spider. Natao hitadiavana sy hitadiavana ary hikirakira votoaty mifototra amin'ny fepetra sasany. Raha tsy mifanaraka amin'ny fomba fanao tsara indrindra ny vohikala dia tsy hitranga ny firaketana anarana. Maro ireo antony hafa tafiditra amin'izany, nefa tadidio foana ny mifantoka akaiky amin'ny fotoana mifandray sy ny HTTP status code amin'ny tranokalanao Source .